1. Kedu ụdị akụrụngwa ịchọrọ iji etching anwụ? A: ọ dabere na ngwaahịa na njirimara ihe. Ngwaahịa enwere ike ịkụ ọkpọ na-aga n'ihu nwere ike iji igwe na-anwụ anwụ (yana ọrụ ndị mejupụtara), dị ka: teepu nwere akụkụ abụọ, mpempe akwụkwọ mgbasa ozi, ihe ngosipụta eji ...
Moldghọta ihe eji akpụzi ngwa ọrụ E nwere ihe karịrị 100 ụdị mma dị iche iche nke nkuku agụba, ike nke agụba na agụba, ọka nke agụba na teknụzụ nhazi nke elu na agụba. Mmepe na mmeputa ihe eji ebu ihe dabere na nghota miri emi nke ihe ndi ahia ...
Na Jenụwarị 4th, a na-eri Nri Anyasị Afọ iji mee ememme afọ ọhụrụ. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru okwu ahụ iji kelee onyinye nke ndị otu ezinụlọ ahụ nyere n'afọ gara aga wee nye ndị ọrụ pụtara ìhè. Site na mbọ nke niile, anyị nwetara ezigbo arụmọrụ na ...
Ngosi ozi ọma
site ha na 19-05-28
Na Machị 27th 2019, Yuebaixiang sonyere Shenzhen International Die na akpụzi Expro, ebe anyị gosipụtara ngwaahịa ndị a kpụrụ anwụ na Cut-Die ndị ahịa anyị wee nweta nnabata ha. Site n'ókè nke ihe ngosi nke afọ a, ihe ndị ahịa na-looki ...
Nchekwa onwe-ihe ijuputa osise Die, Nkpuchi Rotary Nwụrụ, Steel Die osise, Laser anwụ, Ebibi-Drop ịrụzu Rotary Die, Ulo Oru enyo enyo,